तपाईले बैंक बाट लोन निकाल्नु भएको छ ? उसो भए यो पढ्नुहोस राष्ट्र बैंकले जारि गर्यो यस्तो सूचना ! - सिधा मिडिया
३० श्रावण २०७८, शनिबार ०६:०९ मा प्रकाशित
136370 जनाले पढ़िसके
काठामाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्स्ता घटाएर कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नु पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे सो निर्देशन दिएका हुन् ।
निफ्राका सेयरधनीहरुलाई अर्काे खुसीकाे खबर
जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्थामा लाग्यो ब्रेक, सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
वर्गीकरण नभएका जग्गा पनि धितो राख्न पाउने, सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश
अब जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन नपाइने, जारी भयो यस्तो निर्देशन